सेनापतिज्यू ! नेपाली सेनामा किन हुँदैछ यस्तो ?
श्रीमान् प्रधान सेनापतिज्यूलाई हामी सकल दर्जाहरूको सर्ब प्रथम सलाम ।
श्रीमान् प्रधान सेनापतिज्यूमा हामी कसल दर्जाहरूको गुनासो यसै साँघु पत्रिकामार्फत राख्न गईरहेको छौं । अन्यथा नलिई दिनु होला र आफ्नो जिज्ञासा सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा साँघु पत्रिकाका संचारकर्मीहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछौं ।
नेपाली सेनामा २०६० साल बैशाख २८ गते पछि भर्ना भएका सबैको सेवा अवधि २० वर्ष भयो त्यसमा बारम्बार हामीहरूले श्रीमान् प्रधान सेनापतिज्यू समक्ष यस विषयलाई विचार बिमर्श गरियोस् भनि बिन्ति पत्र चढाउंदै आयौं ।
तर, प्रधान सेनापतिज्यूहरू परिवर्तन हुनु भयो तर हाम्रो गुनासो संधै रहिरह्यो । श्रीमान्लाई पनि हामीले बारम्बार यसै प्रश्नलाई दोहो¥याई रहने छौं किन भने चीफ पूर्णचन्द्र थापाज्यूले चाहेमा यो परिवर्तन हुन्छ किन भने नेपाली सेनाबाट नै बनाएर पठाएको नीति नियम नेपाल सरकारबाट पास हुने गरेको हामी सबै जानकार नै छौं । त्यसैले श्रीमान् यसलाई एक पटक पुन बिचार गरियोस् भन्ने बिन्ति बिसाउछौं ।
यसै बीचमा सुन्नमा आएको एक अनौठो खबर जसले हामी अचम्मित भएका छौं । नेपाली सेनामा महिला र पुरुषको सेवा अबधि छुट्टाछुट्टै गर्ने रे ! के नेपाली सेनामा भर्ना हुँदा महिलाको सेवा अबधि र पुरुषको सेवा अबधि फरक पारेर मागिएको थियो र ? हरेक ठाउँमा प्रयोग गरिने शब्द “महिला पुरुष बराबरी” अनि फेरि नेपाली सेनामा कहाँबाट यो परिकल्पना गरिदैछ कि महिला र पुरुषबीचको भेदभाव ।
चीफ सा’बलाई हाम्रो आग्रह के छ भने हो तपाईले बोलेर गरेको खण्डमा हाम्रो जागिरको अबधि घटाउन सक्नु हुन्छ किन भने महिलाको लागि बनाउन मिल्छ भने हामीहरूको परिवर्तन गर्न पनि मिल्छ । त्यसैले यस विषयमा ध्यानाकार्षण गर्न चाहन्छौं ।
यसैबीचमा हामी तल्लो दर्जालाई माथिल्लो तहबाट बारम्बार हुने गरेका बिभिन्न अन्यायका घटनाहरूमा दोषी अधिकृतलाई किन कारवाही गरिदैन श्रीमान् ? यही कारवाही नगर्ने गरेर नै होला हालै मात्र अर्को एक अनौठो घटना सुन्नमा आएको छ तर त्यो घटना गुपचुप पारिदै छ रे भन्ने सुनिएको छ । त्यो हो चन्दननाथ गणको ।
त्यस गणबाट छुट्टिएर रहेको एउटा पोष्टमा पोष्टपति रहेका सेनानी अनिल पन्तले सा.का.सि.लाई रक्सी खाएर हो या के गरेर निज सा.का.सि.को अण्डकोषमा लाताले हिर्काएका थिए रे जसको कारण निज सा.का.सि. २ दिन सम्म मेडिकल भर्ना भई बसेका थिए रे । के नेपाली सेनाका अधिकृत भएपछि सिपाहीलाई लाताले हान्न पाईन्छ ? अनि यदि त्यसको ज्यान केही भएको भए त्यसको घरपरिवारमा के हुन्थ्यो ? गलत गर्नेलाई सजाय÷दण्ड दिनुपर्नेमा उक्त गणका गणपतिले निज अधिकृतलाई प्रोत्साहन गरी निज सा.का.सि.लाई नै उल्टै गाली गरेका छन् रे यो त साह्रै अन्याय भएन र ?
अहिले नेपाली सेनाको सिपाही दर्जामा भर्ना भएका व्यक्ति अनपढ छैनन् र कुन कुरा गलत हो अबश्य छुट्ट्याउन सक्छन् । यस विषयलाई गणले गुपचुप पारी राख्दै निज पीडितलाई यो कुरा वाहिर कसैसंग भन्लास् भनी वार्निङ्ग दिईएको छ रे । त्यसैले त्यस विषयमा अहिलेसम्म वाहिर आउन नसकेको हो । के गर्ने ठाडो आदेश यो कुरो बाहिर गयो भने तँलाई के पो गर्छु भन्ने डर दिएपछि बिचरा पीडित सिपाहीले के पो गरोस् ।
उक्त घटनाको तत्काल छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्ने गणपतिले हालसम्म पनि कुनै कारवाही नगरेकोले यस विषयलाई गहन अध्ययन गरी दोषी माथि कारवाही होस् र यस्ता घटनाहरू नदोहोयोस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं ।
अन्तमा श्रीमान् नेपाली सेनामा को महिला को पुरुष सबै बराबरी समयाबधि पूरा गर्नेगरी भर्ना भएका हौं । हामी सबैको सेवा अबधि १६ देखि १८ वर्षसम्मको लागि पहल गरिदिनु हुन पुन अनुरोध गर्न चाहन्छौं । – पीडित सैनिक, जवानहरू